Xildhibaan Ka Tirsan Golaha Wakiilada, Lagana Soo Doortay Togdheer Oo Wasiirka Ciyaaraha U Soo Jeediyay Inuu Is Casilo..Waa Kuma | Salaan Media
Xildhibaan Ka Tirsan Golaha Wakiilada, Lagana Soo Doortay Togdheer Oo Wasiirka Ciyaaraha U Soo Jeediyay Inuu Is Casilo..Waa Kuma
Hargaysa(SM) Xildhibaan Xuseen Maxamed Cige oo ka mid ah xildhaanada golaha wakiilada ee laga soo doortay gobalka Togdheer, ayaa u soo jeediyay wasiirka ciyaaraha inuu iska casilo xilka uu qaranka u hayo,isaga oo ku eedeeyay inuu qayb ka ahaa fashilka ku yimi kooxdii gobalka Togdheer.
Wasiirka ciyaaraha Cali Siciid Raygal ayaa hadalkaas xildhibaanka ka gubtay sheegayna in uu doonayay in xildhibaanada gobalka Togdheer aanay waxba waydiin. Waxaanu sheegay in aanu eedahaas waxba ku lahayn. Waxa wasiirka ciyaaraha shalay u yeedhay xildhibaanada arimaha bulshada ee golaha wakiilada in kasta oo ay xildhibaano kale oo aan guddigaas ka tirsanayn balse laga soo doortay gobalkaasi ay ku weheliyaan guddiga arrimaha bulshada fadhigaas, kuwaas oo uu ka mid ahaa Xildhibaanka wasiirka su’aasha weydiyay oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha.
Sida oo kale waxay si wada jir ah ugu soo jeediyeen inuu soo daayo kooxdan ciyaartoyada ah si looga hortago khilaaf sii balaadha oo goblka Togdheer dadkiisa dhex yimaada.
Xildhibaan Xuseen Maxamed Cige oo ugu horayntii wasiirka ciyaaraha la hadlaayay waxa uu yidhi “ Anigu haddaan ahay xildhibaan gobalkaas (Togdheer ) laga soo doorto waxaan u arkaa in arintaas ka dhacday ciyaaraha in kharibaadooda ay leeyahiin xukuumaada iyo odayaasha gobalka taasna aad masuuliyadeeda koowaad leedahay mar haddii aad wasiirkii ciyaaraha tahay oo aad dhalinyaradii kala qoqobtay oo loo baneeyay inay is dilaan, mar hadaanad ka soo baxin miyaanay ahayn inaad is casisho.”
Wasiirka ciyaaraha Cali Saciid Raygal ayaa hadalka xildhibaanka kaga fal celiyay “Aniga Burco wasiir uma ahi taasna maaha mid xaq laygu leeyahay. Gudi wax layidhaado oo aan baabiiyay ma jirto, waxaanan shaqada ka fadhiisiyay isu duwihii wasaarada iyo shaqaalahii gobalkaasu joogay oo la yidhi dhibtay wadaan, cidna ma kala qaybin oo reerna 11 qof keena maan odhan reerna 11keena maan odhan ee markiiba gobalka waan ka soo laabtay madaxdiisa iyo odayaashiisa ayaana yidhi anagaa hawlaha inta hadhay dhamaynayna. Inkasta oo aan jeclaa in aanay maanta xildhibaanada gobalka Todheer aanay waxba I waydiin, ileen danbigay wax ku leeyahiin oo waa gobalkoodiiye, xaqiiqduna taas weeye oo danbiga kamay madhnayn, laakiin xildhibaanada kale waa ay iwaydiin karaan.”
Xildhibaanada gudida arimaha bulshada ee golaha wakiilada iyo xildhaanadii fadhiganku wehelinaayay ayaa wasiirka ciyaaraha u soo jeediyay inuu sii daayo ciyaartoyada qobalkaTogdheer lana dhameeyo kala-qabsanaantooda si gobalka looga badbaadiyo kala fogaasho.